Ebe ndị Arsiv - RayHaber
HomeỤzọ Awara AwaraỤlọ elu
E mebiri ihe ndekọ nke 2019 na Sabiha Gök Airporten Airport Eid al-Adha. Beforebọchị tupu ụbọchị oriri nke 10 Sabiha Gökçen Airport, nke ndị njem 119 puku 73 jiri na Satọde, rute ọnụ ọgụgụ ndị njem ya kwa ụbọchị na 2019. [More ...]
Hüseyin Keskin, Onye isi nduzi nke ọdụ ụgbọ elu State (DHMİ) na Onye isi oche nke Kọmitii Kọmitii kwupụtara na n'ihi nhazi a mere, a na-ebelata oge ụgbọ elu nke ọdụ ụgbọ elu Istanbul site na nkeji 1300 na-echekwa ihe ọkụ ọkụ 8 kwa ụbọchị. Na isiokwu [More ...]
3 n'ọdụ ụgbọ elu Istanbul. Runway Construction
General Directorate of State ọdụ ụgbọ elu State (DHMİ) na Onye isi oche nke Board Hüseyin Keskin gara mpaghara ebe a na-agba ọsọ 3 nke a na-ewu na ọdụ ụgbọ elu Istanbul ma nweta ozi sitere n'aka ndị ọchịchị banyere ọrụ ahụ. Kekọrịta na akaụntụ Twitter (@dhmihkeskin) [More ...]
Airportgbọ elu Istanbul ghọrọ ọnụ ụzọ ikuku na-adịgide adịgide nke ndị na-emeghe maka ndị na-abanye na ndị na-apụ apụ na mba. E bipụtara mkpebi Onye isi ala banyere okwu a na Official Gazette. Site na ya, e kpebiri dịka Iwu Paspọtụ iji kpebie ọdụ ụgbọ elu Istanbul dị ka ọnụ ụzọ ikuku na-adịgide adịgide nke na-emeghe maka ọnụ ụzọ na ụzọ ọpụpụ nke mba ụwa. [More ...]
DHMI na-ekwupụta onyunyo July
General Directorate of State ọdụ ụgbọ elu (DHMİ), 2019 afọ nke July, ndị ọrụ ụgbọ elu, ndị njem na ọnụ ọgụgụ ụgbọ mmiri mara ọkwa. N'ihi ya, 2019 na July; Gbọ elu ụgbọ elu na ebili na ọdụ ụgbọ elu, 79.311 n'ime ụgbọ elu na mba [More ...]
Ozi nke Transportgbọ njem “Ọdụ ụgbọ elu Istanbul”
Na nkwupụta nke Ministry of Transport; Aşağıdaki chọrọ nkwupụta a na-enweghị isi na International Civil Aviation Organisation (ICAO), nke dị na ụfọdụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi, na-enyocha ọdụ ụgbọ elu Istanbul n'etiti usoro nke adịghị ike nchebe. Turkey aku na uba na oru [More ...]
Mwepụta ọdụ ụgbọ elu Istanbul site na Ozi Ministrygbọ njem na akụrụngwa
Ekwuputara akụkọ banyere ozi banyere nzaghachi nke Minista Turhan si na oflọ Ọrụ Transportgbọ njem na akụrụngwa maka ajụjụ a jụrụ maka ọdụ ụgbọ elu Istanbul. Nke a bụ nkwupụta sitere na Ngalaba Transportgbọ njem na akụrụngwa banyere ọdụ ụgbọ elu Istanbul: Bakanı Minister nke Transportgbọ njem na akụrụngwa [More ...]
Nkwupụta nke ọdụ ụgbọ elu Istanbul site n'aka Minista Minista nke Transportgbọ njem
Airportgbọ elu ọdụ ụgbọelu Istanbul malitere ịrụ ọrụ na ụbọchị 76 ụbọchị ndekọ ọnụ ọgụgụ nke ihe omume nke ndapụta mere na ụgbọ elu ndị njem ụgbọelu Turkish Izmir-Istanbul kụrụ ma merụọ ìgwè anụ ufe. Minister nke Transportgbọ njem na akụrụngwa [More ...]
Otu n'ime okporo ụzọ Taksị mebiri emebi na ọdụ ụgbọ elu Istanbul
Na mbido Eprel, a na-elekọta otu n'ime ụzọ tagzi na-anya na ọdụ ụgbọ elu Istanbul, ebe ọ na-aga n'ihu. Dabere na Airporthaber, mgbe emechiri mmechi nke ọdụ ụgbọ elu nke Ataturk ọdụ ụgbọ elu 5-6 malitere na Eprel, Airportgbọ elu ọdụ ụgbọelu Istanbul dara n'otu n'ime ụzọ tagzi. [More ...]
Nkwenye maka mbufe nke oke na ọdụ ụgbọ elu Istanbul
aku ọrụ ụgbọelu dị na Istanbul Turkey na ya elu na ụgbọelu iGain nkwonkwo-ewu nke Kolin, Cengiz na odomo n'elu igbu mkporohihi nke Galleon Construction ụlọ ọrụ. Ndị Asọmpi Mịnịstrị ahụ kwadoro. İGA A.Ş., nke na-arụ ọrụ nke İstanbul Airport maka afọ 25 [More ...]
Onye isi oche nke DHMI Hüseyin Keskin họpụtara! Ọnye na-bụ Hüseyin Keskin?
A họpụtara Hüseyin Keskin General Manager na Onye isi oche na Board of Directors of State ọdụ ụgbọ elu State (DHMİ). Mkpebi Onye isi ala nke 25 July bipụtara na Official Gazette nke akara ụbọchị 2019 ma gụọ 30842 na-agụ dị ka ndị a: Tone Na-ahụ Maka Onye Isi Ọchịchị nke portslọ Ọrụ Ọdụ Airgbọelu State. [More ...]
BTSO Logistics Inc. Na-enye Uru Ọsọ na Uru Ego na Mbupụ
Onye isi oche BTSO Muhsin Koçaslan, onye kwusiri ike na ndị na-ebubata ihe site na Bursa na ndị nnọchi anya ngalaba ọrụ nwere ike ime ka Yenişehir bụrụ ebe dị mkpa na ibu ụgbọ ikuku, jiri aka dị na aka wee kpọọ ụlọ ọrụ kpọrọ oku ka ha rite uru na Yenişehir Air Cargo Facilities. [More ...]
Airportgbọ Na-adọba ụgbọ elu Istanbul na Oge andbọchị Ego ole?
N'ime oke nke PPP Providence nke General Directorate of State ọdụ ụgbọ elu, ekwuputara ọnụ ahịa ụgwọ ebe a ga-etinye ya na 2019 n'ọdụ ụgbọ elu / ọnụ ọnụ ndị na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu / Terminal Operator. Portgbọ njem ụgbọ mmiri mbụ na Istanbul, na ọtụtụ puku ndị njem kwa ụbọchị [More ...]
N'ime ọnwa isii mbụ nke 2019, ọdụ ụgbọ elu TAV nyere ndị njem njem nde mmadụ 12 mmụba nke pasent 38,3 ma e jiri ya tụnyere otu oge nke afọ gara aga. Turkey bụ ụwa na-eduga brand na ọdụ arụmọrụ, TAV Ụgbọelu 345 nde euro na ntụgharị ke akpa ọkara nke afọ [More ...]
Òtù Na-ahụ Maka Ọgbọ na Singapore Na-enyocha Istanbul Airport Tower
Singapore Civil Aviation Authority (CAAS) delegation gara DHMİ Istanbul Airport ụgbọ okporo ígwè Control Tower na Istanbul Approach Control Units. Ndị nnọchiteanya CAAS na Singapore bụ onyeisi oche ndị isi oche Soh Poh Theen na Director Yeo Cheng Nam [More ...]
Njem nke atọ na Istanbul Airport Yapıl!
Owuwu nke uzo owara nke ato n'Ugburu Istanbul, nke gunyere onu ato, gabu nke kachasi n 'uwa mgbe oge nile di. Na runway ezube ka etinye ya na nkera nke 2020, Istanbul Airport [More ...]
NDỊ Maçka Flight gbagara Trabzon na ebe nchekwa nke Şehit Eren Bülbül
OTU ụgbọ mmiri Maçka gbagara Trabzon na ebe nchekwa nke Şehit Eren Bülbül. Boeing 787-9 Dreamliner, ụgbọ ụgbọ elu Turkish (THY), aha ya bụ 'Maçka' na ebe nchekwa nke onye ọhụrụ martyr Eren Bülbül, bụ onye mere njem mbụ ya si Trabzon ruo Trabzon. [More ...]
Nnukwu ugbo na ikuku na Istanbul Airport!
Turkey, otu n'ime ndị kasị ibu ego na otu n'ime ndị kasị ibu ọdụ ụgbọelu dị ka ajụjụ akara maka ịchọta nke atọ ọdụ Istanbul emejuputa na ụwa na-aga n'ihu. Izu gara aga, Istanbul-Antalya na-abanye n'ime ìgwè ewu na atụrụ ahụ na iko nkịta ụlọ juru [More ...]
Ebe obibi Sabiha Gökçen na Istanbul Airport
Istanbul Sabiha Gokcen Airport na nkeji gara aga jiri ya tụnyere otu oge n'afọ gara aga 2018IN nke mba ụwa dum 31 nde 1 puku puku 193 mụbara. Ebe ọ bụ na ọdụ ụgbọ elu ọhụrụ dị anya, ndị njem nleta na-ahọrọ Sabiha Gökçen. Ọdụ elu ọhụrụ nke Atatürk Airport [More ...]
N'ịlaghachi na akụkọ agwọ dị na Mersin Çukurova Airport Airport dị ka ekwere na ufọt ufọt April, ụgbọ elu ahụ adaaghị, ụgbọelu ugbo mbụ ahụ mere na 30 mita. Onye isi oche nke AKP Mersin Deputy Lütfi Elvan 7 ọnwa [More ...]
DHMI na-akpọsa 6 Nde ndị njem na ụgbọ elu
General Directorate of State Airport Authority (DHMİ), 2019 afọ nke June, ụgbọ elu ụgbọelu, ndị njem na ụtụ ọnụ ọgụgụ mara ọkwa. Ya mere, na June nke 2019; Ụgbọelu na-ebute ma na-apụ na ọdụ ụgbọelu, 73.487 na ụgbọ elu ụlọ na mba [More ...]
Director General nke Fire: "Turkey Ga-ebe oria a kachaa nke World Air Transport"
State Authority Authority (DHMİ) Deputy General Manager Mehmet Ateş, kwuru okwu dị mkpa banyere atụmatụ ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ahụ. Na ụgbọelu ụlọ ọrụ na Turkey, na ọhụụ nke ịghọ onye ndú nke ndị isi nzọụkwụ iwere na-adịbeghị anya, State Ụgbọelu Enterprise si (SAE) [More ...]
Ọdụ ụgbọ mmiri New Tokat mepee na 2020
Gọvanọ Dr. Ozan Balcı mere nyocha na nyocha na ebe a na-ewu ihe owuwu ihe owuwu nke New Airport. Ụlọ ọrụ Toket na mpaghara ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu na obodo nta nke Söngüt Tokat New Airport na saịtị nke usoro ọmụmụ nnukwu ihe na-enyocha Gọvanọ. [More ...]
Ịga Antalya Airport mfe
Obodo Antalya Metropolitan agbakwunyere 600 na mgbakwunye na 800 na 400 dị ugbu a iji mee ka ị banye n'ọdụ ụgbọelu. A na-etinyere ụzọ nke usoro ahụ. Naanị ndị na-aga n'ọdụ ụgbọ elu nwere ike ịba uru site na mpaghara atọ ndị a na-agaghị eme. [More ...]
Ụgbọ okporo ígwè dị elu na ọdụ ụgbọ elu na Yozgat
Ọdịdị ụgbọ oloko dị elu nke ga-ebelata nrịanya Ankara-Yozgat na ihe dịka 55 nkeji na nwube nke ọdụ ụgbọ elu, nke ga-enye nnukwu onyinye na obodo anyị n'akụkụ ọ bụla, na-aga n'ihu ngwa ngwa. Yozgat Gọvanọ Kadir Çakır, High Speed ​​Train Yozgat-Sivas Line Project Manager [More ...]
ONYE nke na-akụda Flock nke Nnụnụ na Istanbul Airport
MGBE ndị na-agba ọsọ si Istanbul gaa Antalya, ha gbaghaara ìgwè atụrụ nnụnụ. E nwere mgbape na window windo. Ka ị na-ekpebi ebe ebe Istanbul Airport dị ọhụrụ, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke òtù gburugburu ebe obibi, karịsịa North Forest Defense, [More ...]
'Akụkọ Tayyareci' na Bursa; Kpọtụrụ ya ozugbo
'58. Oge a, 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' nọ na-eme ememme International Bursa Festival. '58. Ememe International Bursa na-aga n'ihu n'ịgbagharị zuru ezu. Bursa Culture, Arts and Tourism Foundation na nnọchite nke Bursa Metropolitan Municipality [More ...]
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa August 2019 (305) July 2019 (636) June 2019 (503) Mee 2019 (525) April 2019 (418) March 2019 (520) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (436) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (580) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (555) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (494) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (541) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (536) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (770) September 2014 (598) August 2014 (809) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (831) September 2012 (886) August 2012 (976) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)